Wuxuu bixiyaa daraasadaha caafimaad ee gabadha yari u baahan: 11 sanadood ka dib, waxay badbaadisay nolosheeda - TELES RELAY
ACCUEIL » DARYEELKA CAAFIMAAD Wuxuu bixiyaa daraasadaha caafimaadka ee gabadha yar ee baahan: 11 sano kadib, waxay badbaadisaa nolosheeda
Waxaa jira sirta nolosha fudud oo ay dadku badanaa iloobaan ama gebi ahaanba iska indhatiraan: markii aad wax siiso si aan ikhtiyaari ah u dhisnayn, waxay u badan tahay inaad wax hesho. Iyo in kasta oo dadka qaar ay u malaynayaan inay tahay xukun fudud, ninku wuxuu doonayaa inuu dammaanad qaado in taasi tahay kiiska.
Sheekada xiisaha leh ee nin badbaadiyey dhakhtar uu caawiyay sanadihii 10 sano ka hor ayaa dhawaanahan ka dhex abuuray shabakadaha bulshada.
Ninku wuxuu caawiyay gabar la yiraahdo Tam Ling ee 2008, ka dib dhulgariir ka dhacay gobolka Sichuan ee Shiinaha kaas oo saameeyay iyada iyo qoyskeeda.
Gurigooda waxaa burburay dhulgariirkii iyo Tam Ling, sidii oday Walaalaha, waxay ahayd inay daryeelaan labadiisa gabdhood oo yaryar sababtoo ah aabihiis wuxuu curyaamiyey hooyadiisna wey bukootay.
Ninka, oo lagu magacaabo Zheng Hua, ayaa la kulmay Ling oo u dareemay xanuun iyada: xaaladdiisa ayaa xusuusisay caruurnimadiisii. Kaliya igama talin inuu iska qoro iskuul caafimaad laakiin sidoo kale wuxuu kubixiyay waxbarashadiisa iyo kuwa labadiisa ah Walaalo, marka lagu daro bixinta lacagta jeebka.
Kow iyo toban sano ka dib, Tam Ling, oo noqotay dhakhtar indhaha, waxay ku noqotay inay ku celiso fadliga Hua iyada oo badbaadisay nolosheeda.
Markii ay ogaatay in ninka caawiyay muddo dheer ka hor uu la ildaran yahay cudurka maskaxda, hadana loo gudbin doono cusbitaalka ay ka shaqayso, Ling wax walba ayuu ugu diyaariyay.
Waxay ka caawisay howsha gelitaanka, waxay saxeexday waraaqaha waxayna xitaa u raacday dhamaan baaritaanadii loo baahnaa.
11 sano kahor, waxaan geliyay iskuulka caafimaadka. Kow iyo toban sano ka dib, ayay naftayda badbaadisay! Waxaan rabay inaan sheekadan la wadaago si aan dadka ugu dhiirrigeliyo inay naxariis muujiyaan!
Sheekadan dhaqaaqa waxay cadeyneysaa in wax kasta oo yar oo aan sameyno, dhoolatus kasta oo aan bixino, nooc kasta oo jacayl ah iyo ficil kasta oo naxariis leh ay waligood ku dhamaan doonaan inay noqdaan. Codso inaad u soo qaadato wax wanaagsan adduunkaan!